Mandevina ny Lohany Tsy ao Anaty Fasika fa ao Anaty Setroka ny Manampahefana Shinoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2016 9:11 GMT
Mampanao sarombava ny tsangambato eo an-tokotanin'ny Foibe Ara-bola Manerantany ao Chengdu ho fanoherana ny setroka misy poizina ao an-tanàna ireo mpanao fihetsiketsehana. Sary avy amin'ilay mpisera Twitter @caichu88
Efa ho tanàna roapolo ao Shina avaratra no voarakotra setroka nanomboka ny faramparan'ny volana Novambra. Ambonin'ny 300 mikrograma isaky ny metatra toratelo (µg/m³), ary ambonin'ny 500 µg/m³ any amin'ny faritra sasany ny tahan'ny kasinga bitika, na PM 2.5 eny amin'ny rivotra nandritra ny tapa-bolana . Mampidi-doza ho an'ny fahasalamam-bahoaka izany loto betsaka izany ary mety hiteraka aretin'ny havokavoka, homamiadan'ny havokavoka, na fahafatesana mialoha eo amin'ny olona olona manana olana amin'ny fo sy ny havokavoka.
Tamin'ny 15 Desambra, nanome toro-hevitra ho an'ireo tanàna 23 manerana ny firenena ny Minisiteran'ny Fiarovana ny Tontolo iainana namoaka fanairana mena manoloana ny olan'ny fandotoan-drivotra. Ny tanànan'i Beijing no tanàna voalohany nanaraka ny soso-kevitra ary namoaka fanairana mena [loza mihatra] maharitra dimy andro.
Mampiseho ny setroka mandrakotra ny tanàna ny sary nalaza tamin'ny aterineto nalain'ilay mpitati-baovao iray tao Beijing tamin'ny 16 Desambra, sary nalainy tany amin'ny farany ambonin'ny trano manaka-danitra namboarina vao haingana tao Beijing:
What an amazing shot of a smoggy #Beijing below taken from the top of CITIC's new China Zun building! #北京 #雾霾 pic.twitter.com/noX4milXVn
Oay izany sarin'ny setroka ao Beijing, nalaina avy ao amin'ny tampon'ny tranobe manaka-danitra China Zun vaovao an'ny CITIC!
Mbola ratsy koa, fikarohana ara-tsiantifika iray vao haingana no nahitana atodin-tarazom-bakteria mahatohitra fanafody antibiotika tao anatin'ny santionan-drivotra tao Beijing tamin'ny Janoary 2013 fony rakotra setroka ny tanàna. Na dia mila fikarohana fanampiny betsaka aza ny fiantraikan'ny fisian'atodin-tarazom-bakteria (fr:gène) tahaka izany, dia jeren'ny manampahaizana ara-tsiantifika ho fandrahonana ny fahasalamam-bahoaka izany.
Nanombatombana ireo fanadihadiana sasany fa niteraka fahafatesaka aloha loatra hatramin'ny iray tapitrisa isan-taona tao Shina ny fandotoan-drivotra. Niaiky ny manampahefana ao Beijing fa i Shina no manana olana momba ny fahalotoan'ny rivotra ratsy indrindra manerantany ary nampanantena ry zareo handray fepetra hanadiovana ny rivotra. Tamin'ny herintaona, nampiditra rafitra fanairana i Beijing, ary iray tamin'ireo fepetra noraisina tamin'ny fiandohan'ny volana Desambra ny fametrahana tafondron-javon-tsetroka ao amin'ny tanàna maro:
Anti-smog vehicle popular in #China, but experts warn ‘no more effective than high-powered sprinkler’ https://t.co/tLBmtAOLcS pic.twitter.com/LjFcvckQpX
Fiara miady amin'ny zavon-tsetroka malaza ao Shina, saingy nampitandrina ny manampahaizana fa tsy mahomby noho ny fanondrahana manana vaika matanjaka izany
Na izany aza, tsy mahomby ny fiedinedin'ny tafondron-javon-tsetroka ary maro ireo mahita izany toy ny fampisehoana ara-politika fotsiny ho an'ny vahoaka. Ny fipoiran'ny sary-sy-soratra antserasera malaza indray manao hoe “manome setroka ho an'ny vahoaka” (喂人民服雾), izay mitovitovy feo amin'ny teny filamatry ny Antoko Komonista Shinoa manao hoe “Manome ho an'ny vahoaka” (為人民服務) tao anatin'ny herinandro vitsivitsy no itarafana ny lonilonim-bahoaka manoloana ny fandotoana.
Tsy nahavita nitondra fanovana ho amin'ny lafiny tsara ny hatezeram-bahoaka manoloana ny loton'ny rivotra nandritra ny taona vitsy lasa, ka mampitombo ny tsy fahafaham-po. Na dia ekena amin'ny fomba ofisialy aza ny olana ary nanome antoka ny manampahefana fa manga ny lanitra mandritra ny lanonan-dehibe, dia heverina ho ivelambelany fotsiny izany ezaka izany.
Nampiseho ny fikarohana vao haingana notontosain'ny ekipa Shinoa mpikaroka ao an-toerana fa taorian'ny fepetra vonjimaika noraisin'ny fanjakana ao an-toerana, tahaka ny fanakatonana orinasa sy famerana ny isan'ireo fiara eny an-dalambe mba hanadio ny lanitra mandritra ny hetsika ara-politika, tsy vitany hoe miverina indray ny loto fa vao mainka mitombo tsy tahaka ny teo alohan'ny lanonana.
Nihatra tamin'ireo tanàna ny famoahana fanairana mena hampidirana andiana fepetra vonjimaika sy mitovitovy amin'izany — fampiatoana ny fananganam-panorenana, famerana ny isan'ny fiara sy ny fanakatonana orinasa — izay sokajiana ho manakorontana ny fiainana andavanandron'ny mponina ary tsy mamaha ny olana iavian'ny fandotoana.
Raha ny marina, matetika raisin'ny manampahefana ho fanakorontanana ny filaminana ara-tsosialy ny ezaka hamantarana ny anton'ny setroka misy poizina, araka ny hita tamin'ny famoretana ireo olom-pirenena miezaka misarika ny sain'ny vahoaka manoloana ny olana tao Chengdu, tanàna lehibe ao amin'ny faritra Sichuan.
Ity ambany ity ny tatitra fohy momba ny hetsiky ny olom-pirenena tao izay nozarin'ilay olo-tsotra mpitati-baovao monina ao Etazonia @caichu88:
Nanao fihetsiketsehana teo ivelan'ny Foibe Ara-bola Manerantany ao Chengdu ny taranaka taorian'ny taona 1990 tamin'ny 8 Desambra. Vao haingana i Chengdu no voaloton'ny setroka ary nanao fihetsiketsehana teo ivelan'ny foibe ara-bola ireo olon'ny taorian'ny taom-polo 1990, mitaky amin'ny fanjakana hamaha ny olana. Nanomboka tamin'ny 6 Desambra, nalaza tao amin'ny media sosialy teo amin'ireo mponin'i Chengdu ny hafatra iray fa voafandrika ao anaty zavona i Chengdu. Alevintsika ao anaty setroka ny lohantsika. Tay ry orinasa shimika para-xylene (PX) ao Pangzhou, nahatonga an'i Chengdu ho tanàna misy poizina.
Tamin'ny taona 2013, nanao famoriam-bahoaka ho fanoherana ny dingana roa fanitarana ny orinasa shimika ao Pangzhou ny mponina ao Chengdu, saingy tsy nahomby ny hetsika. Taorian'ny fanitarana azy, niharan'ny setroka mainty avy amin'ny tobin'orinasa shimika i Chengdu hatramin'ny Jolay 2015. Ankehitriny, niditra dingana fahatelo amin'ny fanitarana ny tetikasa.
Raha tokony hijery manokana ny ahiahiam-bahoaka ao Chengdu ny fanjakana dia ny nanaparitaka polisy misahana ny rotaka no nataony, ary nogadraina ny mpiserasera sasany namoaka ny sora-baventin'ny fihetsiketsehana tao amin'ny media sosialy. Tao amin'ny WeChat, nofafàna avokoa ny adihevitra rehetra momba ny olan'ny zavon-tsetroka ao Chengdu. Voalaza fa nanome baiko an'ireo dokotera tao amin'ny hopitalin'i Chengdu ny manampahefana tsy hilaza ny fisian'ny fifandraisana eo amin'ny zavon-tsetroka sy ny aretina.
Namazivazy ny fepetran'ny manampahefana amin'ny famahana ny olan'ny zavon-tsetroka ny mpisera Twitter @xiucai1911:
Angano vaovao momba ny fandevenana ny loha ao anaty fasika: “Tatitra ho an'ny mpitarika: Voavaha ny olan'ny zavon-tsetroka!” Tsara! Ahoana no nahavitanareo izany? Nofafanay ny lahatsoratra rehetra momba ny zavon-tsetroka, noraràna ny olona tsy hanao sarom-bava ary nosamborina ireo izay nanoratra momba ny zavon-tsetroka!”
Taorian'ny famoahana fanairana mena [loza mihatra] tamin'ny 15 Desambra, maromaro ireo tatitra avy amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra milaza ny zavon-tsetroka sy ny toro-hevitra ara-pahasalamana mifandraika amin'izany. Na izany aza, mbola voaràra hatrany ny adihevitra rehetra momba ny fiavian'ny zavon-tsetroka.